မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VIII	2
Posted by Kyaemon on Jun 6, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different |2comments
တချိန်တုန်းကနော်ဝေနိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲပြီး ခေတ် နောက်ကျ ခဲ့တယ်၊
နောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးကြွယ်ဝ လာကာ ဥရောပ တိုက်မှာ ဆိုရင်
တဦးချင်းဝင်ငွေ GDP ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတယ်၊
ရေကာတာ တွေကို လုပ်ဘို့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်၊
သူဋ္ဌေးထုံးကိုနှလုံးပိုက်ခဲ့ပုံရတယ်၊ ၁၉၈၀ မှ ၂၀၁၄ ထိ ဇယား အရ နှစ်စဉ် ရေအားမှလျှပ်စစ်အားပို၍
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့ဆီ TWh နဲ့ချီပြီး ရေအားလျှပ်စစ် စွမ်းအား တင်ပို့ရောင်းချတယ်
TWh = ၁၀၀၀ GWh= ၁,၀၀၀,၀၀၀ MWh= ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ KWh
ဇယား ကTerawatt (TWh) (တဲရွာဝတ်) နဲ့ပါ
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကို တအားထုတ်နိုင်ပြီး ၎င်းမှ ၊စက်မှုလုပ်ငန်း
North Sea “မြောက်ပိုင်းပင်လယ်” ကနေရေနံရှာတွေ့လို့လဲတကြောင်း၊
ရေအားမှလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက အရှုံးအမြတ်ဇယား အထက်ဇယားပါ
အဝါရောင် တွေကနှစ်စဉ် အသားတင်အမြတ်တွေပါ၊
အလုပ်ရလိုက်လို့လဲ အကျိုးရှိ တာပါဘဲ၊
Production စက်ရုံ က ၂၁.၈ NOK ( ၂.၆၆ US $) ဘီလျံ မြတ် (ရေကာတာ ဓာတ်အားစက်ရုံပိုင်း)
Grid စက်ရုံ က ၄.၅ NOK (၀.၅၅ US $) ဘီလျံ မြတ် (လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးလိုင်းသွယ် ပြီးဓာတ်အားပို့တဲ့အပိုင်း)
Remaining စက်ရုံ က ၃.၀ NOK( ၀.၃၇ US $) ဘီလျံ မြတ် (ကျန်စက်ရုံတွေ)
စုစုပေါင်း ၂၉.၃ NOK ( ၃.၅၈ US $) ဘီလျံ အသားတင် မြတ်
1 Billion = 1000 million ၁ ဘီလျံ က သန်း ၁၀၀၀ ၂၀၁၃ တနှစ်မှာတင် ၂၉.၃ နော်ဝေကရိုနာNOK ငွေဘီလျံ မြတ်
(၃.၅၈ US ဒေါ်လာ )ဘီလျံ မြတ်
နေရောင်ခြည် ကလျှပ်စစ် အား ၀.၀ %
လေ တွန်းအား က လျှပ်စစ်အင်အား ၁.၄ %
စမ်းအိုင်ရေပူ က လျှပ်စစ်အင်အား ၃.၃၉၅ %
ရေမှ လျှပ်စစ်အင်အား ၉၆.၁ % ရှိကြတယ် ——
၂၀၁၂ ထက် ၂၀၁၃ အမြတ်က ၁၀ % တိုးလာတယ်
နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ ရွှေတွင်းတွေကရွှေတွေ ဒလဟော စီးဆင်းလာ
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရွှေမိုးငွေမိုး အသေအချာ ရွာချ သလို ပါဘဲ၊
ရေနံ ကို “ရွှေ မဲ”လို့ ခေါ်သလို ရေကနေလျှပ်စစ်အား ဖြစ်နိုင်လို့ ၎င်းရေကို
” ရွှေဖြူ ” လို့လေးလေးစားစားနဲ့ ခေါ်တယ်၊ ဦးထိပ်တင်ပန်ဆင်
မိရွှေဖြူ က စက်ရုံတွေကိုလည်စေပြီး လူတွေကိုအလုပ်ပေးမှာဖြစ်လို့
မိရွှေဖြူ ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံချဉ်းကပ်နိုင်ရင် နိုင်ငံရေးအာဏာကို
နို့မဟုတ်ရင် သူသူငှါငှါ ကမ်းနားသစ်ပင်လို တခါစားဘဲရမယ်၊
ရေကာတာရဲ့ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုး ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ကွင်းဆင်းပြီး ချပြဆွေးနွေး “စေဘို့”၊သတင်းစာမှာ ဖော်ပြပေးဘို့၊
တဘက်နဲ့တဘက်တွေ့ဆုံရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ခွင့်ပြူဘို့ပါဘဲ၊ ၊ ——–
အနီးအနားရှိကြတဲ့ ဂျာမဏီ ဆွီဒင် ယူကေ ဖင်လန် ဟော်လန် နိုင်ငံတို့ဆီ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆက်လက်ပြီး တင်ပို့ရောင်းချ လျက်ပါ၊
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းလို့နော်ဝေ (# ၁၁) က
၂၀၁၄ မှာ US ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၈၇၃. ၆ ရလိုက်တယ်
၂၀၃၀ ကျရင် နော်ဝေ က ၃၂ TWh လျှပ်စစ်ဓာတ်စွမ်းအားကို
နော်ဝေပြည်သူတွေက Thor ကို ဘုရားလို ကိုးကွယ်အားကိုး ပူဇော်ခဲ့သလိုဘဲ
ဒီ ရွှေဖြူ တွေကိုလဲ အားကိုး အမြတ်တနိုး လေးစားရမှာဘဲလို့ ဆောင်းပါးရှင်က ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအားကို တင်စားပြီးရေးထား တယ်၊
( Google နဲ့ရှာဘတ်နိုင်)
ရေအားမှရရှိလာတဲ့လျှပ်စစ် တွေ မှ လဲ ပြည်တွင်းအတွက်သုံးစွဲတာ မနဲပါ၊
ပြည်တွင်းစက်မှုကသုံးတဲ့ဓာတ်အား အမျိုးအစား က ရေအားလျှပ်စစ် အားလုံးလိုလိုဘဲ၊
နော်ဝေ မဖွံ့ဖြိုးမှီ အချိန်မှာ ယူ ကေ နိုင်ငံ က နော်ဝေ ကို လာရင်းနှီးခဲ့တယ်၊ ပုံက ယူကေ ပိုင် Aluminium သတ္တုထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ
BOT ဆိုတာ၊ အခြားမှ လုပ်ငန်းရှင်တွေက စက်ရုံကိုလာရောက် တည်ဆောက် ပြီး၊ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ကာ၊ နောက်ဆုံး (အနှစ်
သက်တမ်း တခု) ပြီးရင်၊ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအစိုးရ ဆီသို့ အပိုင်လွှဲပြောင်းပေး၊တဲ့ စံနစ် ကိုဆိုလိုတယ်
နော်ဝေနိုင်ငံကပြဋ္ဌန်းထားတာက BOT ကာလ အဖြစ် အနှစ် ၆၀ မှ အနှစ် ၈၀ ရှိတယ်၊
ယူကေနဲ့နော်ဝေတို့က အများအားဖြင့် BOT ၇၀ နှစ်နဲ့စာချုပ် ချုပ်ဆို တယ်
(မြစ်ဆုံကိစ္စ မှာဆိုရင် CPI က BOTကို အနှစ် ၅၀ နဲ့ ချုပ်ထားလို့ ယူကေတို့ထက်တောင်စောပြီး မြန်မာအစိုးရထံ ပိုင်ဆိုင်မှုကို လွှဲပြောင်းပေးမယ်၊ နောက်ဆုံး ပေါ် သိပ္ပံနည်းပညာ၊ ခေတ်မှီ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ
ဘီအိုတီ ၅၀ နဲ ၇၀
သေသေချာချာစဉ်းစားရင် နှစ်ပေါင်း၂၀ ပိုကြာတာ က ယူကေ အတွက်
ကောင်းတာပေါ့ဗျား၊နဲနဲနွန်း နွန်း မဟုတ်ပါ၊ ၄၀ % (နောက်ထပ်တဝက်နီးပါး)
ယူကေ တို့ရဲ့ ဘီအိုတီကိုယှဉ်ရရင်၊ မြစ်ဆုံ ဘီအိုတီက နှစ် ၂၀ စောလို့
အောက်ပါ ဇယား များ ကိုကြည့် ပါ၊
၁၉၈၀ ကနေ ၂၀၁၄ အထိ ရေးဆွဲထားတာ ယင်းကာလ မှာဆိုရင်
နော်ဝေနိုင်ငံ က ကျန်အခြား ဥရောပနိုင်ငံတွေထက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရေအားလျှပ်စစ်ပိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်
ယူကေနဲ့နော်ဝေ က ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာ မှာ အရှည်လျားဆုံး ပင်လယ်အောက် ဓာတ်ကြိုးCable ကဲဘဲ လိုင်းကြီး ခင်းမယ်၊
ယင်းလိုင်း ကမိုင် ၄၅၀ ရှည် ပြီး၊ (မော်လမြိုင်ကနေ မန္တလေး ၄၇၀မိုင်)
ယူအက်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂၁၈၀ ကုန်ကျကာ၂၀၂၁ မှာပြီးမယ်၊
(၁ ဘီလျံ မှာ သန်း ၁၀၀၀)
၂၅ နှစ်အတွင်း အိမ်ခြေ ၇၅၀,၀၀၀ အတွက်ဒေါ်လာ US $
သန်းပေါင်း ၅၀၈၀ သက်သာ မယ် The agreement with Norway will save UK households up to £3.5bn (US $ 5.08 billion) over 25 years by importing cheaper electricity, according to an estimate by Britain’s energy regulator Ofgem.
စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် Ed Davey က
လေမရလို့လေအားလျှပ်စစ်မရတဲ့အခါမှာ ခလုတ်တချက်နှိပ်တာနဲ့ဘဲ နော်ဝေနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်တွေကိုသုံး နိုင်တယ်၊
ဘယ်ကိုမှထွက်မပြေးဘဲ ကိုယ့်အတွက် ရေရှည် မြဲမဲ့
သန်းကြွယ် ဖောက်သယ်ကြီး ဖောက်သယ်ကောင်းရလိုက်
တာ က ပွတာဘဲ ကော်တာဘဲ ဖောက် သယ်တွေကိုပင်ပန်း
မြစ်ဆုံအတွက်ဆိုရင် CPI ကဘဲ ဓာတ်ကြိုးလိုင်းသွယ်တာကို
မဟုတ်ပါ၊ (Earn billions pound sterling for 25 years. Good customer – assured or captured paying customer).
မြင်သူ ဖော် စား မမြင်သူကျော်သွား
ကို ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာနဲ့ထုတ်နိုင်အောင်
နော်ဝေရဲ့မြေမျက်နှာခင်း ပထဝီ အနေအထား နဲ့ ရာသီတို့က အကျိုးပေးတယ်၊
ရေကနေရတဲ့ ၁၁၈ TWh လျှပ်စစ် အင်အား ဟာ တနိုင်ငံလုံးက
ထုတ်တဲ့လျှပ်စစ် အင်အားရဲ့ ၉၉ % လောက်ရှိတယ်
၁၉၈၁ မှာ ရေကာတာအကြီးစားအတွက်စည်းကမ်း
ယင်းနှစ် မတိုင်မီကရေကာတာ တွေကို အခါအား
လျော်စွာ စီစစ် စစ်ဆေး မွန်းမံရမှာပါလို့နော်ဝေ
ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြော၊ ရေကာတာလုပ်တာ ဆိုးကျိုးပေးတယ်၊ မလုပ်ဘို့၊ဖျက်ပစ်ဘို့ အကြံမပြုပါ၊
နော်ဝေ နဲ့ယူကေ တို့ကပင်လယ်အောက်မှာခင်းမဲ့
ဓာတ်အားပို့ ဓာတ်ကြိုးလိုင်း ရှည်ကြီးအကြောင်းကို
Wall Street Journal မှာလဲရေးထားတယ်၊
ဓာတ်အားပို့ ဓာတ်ကြိုးလိုင်းက ၄၅၀မိုင် ရှည်၊
မော်လမြိုင် နဲ့မြစ်ကြီးနား က ၄၆၉ မိုင်၊
ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေး က ၃၈၉ မိုင်၊
US $ ၂.၂ ဘီလျံ သန်း ပေါင်း ၂၂၀၀ ဆို တော်တော်လဲကုန်ကျမယ်၊
မြစ်ဆုံ ဓာတ်အားပို့ဘို့ CPI က ဓာတ်ကြိုးသွယ်မှာ၊ကြည့်ရတာ
သူတို့လိုလိုက်ခံဘို့မလို၊ အိမ်နီးချင်းအနီးအနားက ဖောက်သယ်
ဆိုတော့သူတို့ထက် အလုပ်ကုန်ကျစားရိတ် သက်သာတယ်၊
မြန်မာအတွက်ဘာမှမကျန်၊သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကဘဲ
ညစ်ညမ်းပြီး၊သုံးမရတဲ့ ရေကာတာ အခွံလောက်ဘဲကျန်မယ်၊
စသဖြင့်၊ လှုံ့ဆော် စွပ်စွဲကြတယ်၊
စာချုပ်အရ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဓာတ်အားရဲ့၁၀%ကိုမြန်မာအတွက် အခမဲ့
ရမှာ၊ ၆၀၀ MWh လောက်ရှိပါတယ်၊
ရန်ကုန်တဝှိုက် ဓာတ်အား ခဏ ခဏ ကျ၊ မီးတွေ ပျက်၊ရာသီကအလွန်ပြင်း၊ စက်ရုံတွေ
တကဲကဲ၊ အော်ကြဆဲကြ ၊
အဲဒီမြစ်ဆုံက ၆၀၀ MWh နဲ့ဆို ကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ်၊
တရုပ်က ၉၀ % ကိုငွေပေးပြီး ဝယ်ယူရမှာ အခွန်လဲဆောင်ရမှာ၊
ကုန်ကျစာရိတ် နုတ်ပြီး အမြတ်ထဲက အမြတ်ဝေဆုကို မြန်မာအစိုးရက ရအုန်းမယ်
နှစ် ၅၀ ပြည့်ရင် မြန်မာအစိုးရက ဒေါ်လာ ဘီလျံတန် ရေကာတာ ကိုလုံးလုံးပိုင်ဆိုင်မယ်၊
လုပ်လို့ နှစ် ၁၀၀ နှစ် ၁၂၅ ခံ နိုင်မယ်၊ အခွံလောက်ဘဲကျန်တာ မဟုတ်ပါ
ရေကာတာ အခြေအနေကို အမြဲအကဲခတ် တိုင်းတာ ဘို့ရေကာတာအတွင်းမှာ၎င်း၊
အပေါ်မှာ၎င်း၊ရေအလာ အကြိုပိုင်းတလျှောက် အကဲခတ်စခန်းတွေမှာ၎င်း၊ကိရိယာ
တွေ ကျွမ်းကျင်သူတွေချထားမယ်၊မြန်မာတွေကိုအလုပ်ပေးပြီး သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမယ်၊
မြန်မာကနောက်ထပ် ၁၀ % (၆၀၀ MWh )လိုအပ်ရင်၊ စာချုပ်ကိုကျော်ပြီး မြန်မာ တိုးဝယ်နိုင်အောင် တရုပ်နိုင်ငံကလျှော့ဝယ်မယ်၊ မြန်မာအတွက် ဦးစားပေးမှာ၊
ဒိအပြင် လိုသလောက်ကို အခြားတရုပ်ရေကာတာ ကထုတ်တဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအား မှလဲမြန်မာကို ဦးစားပေးတင်ပို့ရောင်းချပေးမယ်၊
(လေးစားအပ်တဲ့ Uncle Gyi ကို လဲသိရှိနိုင်ရန်)
မြစ်ဆုံက US $ ၃.၆ ဘီလျံ US $ သန်းပေါင်း ၃၆၀၀
ဂျပန် စစ်လျော်ကြေး ရယူတုန်းက ဟီးနိုး ကား အချို့ကလွဲလို့
ကျန်တာ အများအစား ကလောပီတရေကာတာမှာ စားသွားတာလို့မှတ်မိတယ်၊
ရေကာတာ တလုံးတလေ လုပ်ပေးဘို့လဲ မလာ
အနောက်နိုင်ငံယိုင် NGO နဲ့မီဒီယာ တွေက သွားပုတ်လေလွင့်တာ
တဦးချင်းဝင်ငွေဆိုရင် နော်ဝေကအမေရိကန်ထက်သာ တာ က
၁၉၈၀ လောက်က စတယ်၊
”မြောက်ပိုင်းပင်လယ်” North Sea ကရေနံ ရလို့
မြန်မာနိုင်ငံမှာလို နော်ဝေလဲ အကြီးစား မြေငလျင် ရစ်တာ ၈ တို့မရှိခဲ့၊
မြန်မာမှာ ရှားရှား ပါး ပါး ရစ်တာ ၇ တခါတရံ ရှိသော်လည်း၎င်းမှာမရှိပါ၊
အကြာကြီးကြာမှ ရစ်တာ ၆.၂ ရှိပြီး ဘေးဥပါဒ် မဖြစ်ပါ၊
နှစ်တရာကျော် တဲ့နော်ဝေ က ဖိုး “တိုင်ဆို (၁)” Norway’s Tysso I – XIV နောက်ဆက်တွဲ | ကောက်နှုတ်ချက်
“နိုင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးငွေတွေကို အလုံးအရင်းနဲ့ များများစာစား တိုးဝင်လာကြတာကိုကြောက်လန့်ပြီး၊
၁၉၀၆ မှာ နော်ဝေ က ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်လာခဲ့တယ်၊
နော်ဝေနိုင်ငံပိုင်သွားဘို့ပါဘဲ” “These laws state that foreigners cannot purchase land or water rights withoutaconcession. A typical prerequisite was that ownership would be turned over to the Norwegian state after 60 to 80 years.”
နော်ဝေ အကျယ်အဝန်းကမြန်မာရဲ့တဝက် လောက်ဘဲ၊
သို့သော် ရေကာတာကြီးလုံးရေ ၃၃၅ရှိပြီး
မြန်မာက ၂၈ လုံးဘဲရှိတယ်၊
အကြီးစားရေကာတာ အသင်းကြီးရဲ့ နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ
Thint Aye Yeik says: ဘယ်သူ ငြင်းနိုင်မလဲ….
.အမေ အစိုးရက… မြစ်ဆုံကို ဆက်လုပ်ခွင့် ပေးမယ်…မပေးဘူး ဆိုတာ…
တချိန်ကျရင်… မြန်မာပြည်က အဲ့ဒီ နော်ဝေးနိုင်ငံလို…နေချင်စဖွယ်..တိုးတက်သာယာနေလိမ့်မယ်လို့..
ဦးကြောင်ကြီး says: တရုတ်တွင် ပနားမား ပေါက်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြမှု အားလုံး ပိတ်ပင် ခံထားရ
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်ပင်း အပါအ၀င် တရုတ်ခေါင်းဆောင်များ၏ သတင်းဓာတ်ပုံ ဖော်ပြသော သတင်းစာ တစ်စောင်ကို ဧပြီ ၆ ရက်က ဖတ်ရှုနေသူ တစ်ဦး (Photo: AFP)
ပနားမား ပေါက်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ အားလုံးကို ၀က်ဘ်ဆိုက်များ၌ ပိတ်ပင်ထားရန် တရုတ်သတင်းလုပ်ငန်း အားလုံးကို ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်သည့် အကြောင်းအရာများအား ဖော်ပြသည်ကို တွေ့ရှိပါက ပြင်းထန်သည့် အပြစ်ပေး အရေးယူမှုနှင့် ကြုံရမည်ဟုလည်း သတိပေးထားသည်။ ပနားမား ပေါက်ကြားမှု အထောက်အထားများအရ တရုတ် ပေါ်လစ်ဗျူရို၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနှင့် လက်ရှိအဖွဲ့ဝင် ရှစ်ဦးထက် မနည်းတို့၏ ဆွေမျိုးများသည် ပြည်ပ၌ ကုမ္ပဏီများ ပိုင်ဆိုင်ထားကြကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်ပင်း၏ ယောက်ဖတော်သူ တိန်ကျားကွေ၊ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီပင်း၏ သမီး လီရှောင်လင်းတို့သည် ပြည်ပ၌ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းနှင့် အခြား ပိုင်ဆိုင်မှုများ ရှိထားကြောင်း ပနားမား အထောက်အထားများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အင်တာနက် ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဆင်ဆာညွှန်ကြားချက် တစ်ခု ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးနောက် တရုတ် အယ်ဒီတာများ အနေဖြင့် ပနားမား ပေါက်ကြားမှုအကြောင်း ဖော်ပြခြင်းအား တားမြစ်ထားခဲ့သည်ကို သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော China Digital Times က ရရှိခဲ့သော ယင်းညွှန်ကြားချက်တွင် ပနားမား ပေါက်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများအားလုံး ဖော်ပြထားခဲ့ပါက ရှာဖွေ၍ ဖျက်ရန်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆက်လက် ဖော်ပြခြင်း မပြုရန် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် China Digital Times က ဖော်ပြခဲ့သော ဒုတိယ ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုက ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်၏ လက်ထောက်များ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ဧပြီ ၄ ရက်က ဖော်ပြထားချက်အား ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ ဖယ်ရှားရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရုတ် သတင်းလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ယင်းညွှန်ကြားချက်များကို ဧပြီ ၅ ရက်တွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြဖွယ် ရှိသည်။ Shanghai Daily သတင်းစာသည် သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ပနားမား ပေါက်ကြားမှု အကြောင်း သတင်းကို အွန်လိုင်းတွင် ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရေး သမားများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော ထိုသတင်းအား ကြည့်ရှုသူများသည် ယင်းစာမျက်နှာအား ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ရေးသားထားသည့် စာကိုသာ တွေ့ရှိခဲ့ကြရသည်။ တရုတ် နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံ စီစီတီဗီကလည်း ၎င်း၏ သုံးမိနစ်ကြာ ပနားမား သတင်းတင်ဆက်မှုကို YouTube တွင် ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ တရုတ်တွင် လူမှုမီဒီယာ၌ ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို စောင့်ကြည့်သည့် Free Weibo ၀က်ဘ်ဆိုက်က “ပနားမား” အကြောင်းအရာသည် တရုတ် လူမှုကွန်ရက်တွင် အပြင်းထန်ဆုံး ဆင်ဆာ ပိတ်ဆို့မှု ခံထားရသည့် စကားလုံးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။